Jurgen Klopp Oo Si WERWER Leh Uga Hadlay Dhaawacyada Van Dijk & Thiago Alcantara Ka Hor Intii Aan Cusbitaalka Loo Qaadin – Muxuu Ka Yidhi Goolkii Laga Diiday – Laacibnet.net
Jurgen Klopp Oo Si WERWER Leh Uga Hadlay Dhaawacyada Van Dijk & Thiago Alcantara Ka Hor Intii Aan Cusbitaalka Loo Qaadin – Muxuu Ka Yidhi Goolkii Laga Diiday
Tababaraha Liverpool, Jurgen Klopp ayaa ka hadlay dhaawacyadii soo gaadhay Xiddigaha kooxdiisa ee Virgil van Dijk iyo Thiago Alcantara oo loo qaaday cusbitaalka markii ay dhamaatay ciyaartii Everton ay barbaraha 2-2 ku kala baxeen.
Van Dijk ayaa ciyaarta laga saaray qaybtii hore oo waxyar socoto markii uu goolhaye Jordan Pickford ku galay qalad xun oo keenay inuu garoonka ka baxo, kaas oo ay khubarada ciyaaruhu tilmaameen inuu u qalmayay kaadh cas hase yeeshee nasiib wanaaggiisa kaga badbaaday.
Thiago ayaa isagana dhamaadkii ciyaarta uu qalad xun ku galay laacibka reer Brazil ee Richarlison oo kaadh cas ku qaatay.
Jurgen Klopp oo ciyaarta kaddib warbaahinta la hadlay ayaa ka dayriyey xaaladda labada ciyaartoy, waxaanu marka hore soo qaatay Virgil van Dijk oo ciyaarta sii wadan kari waayey, waxaanu yidhi: “Muu fiicnayn. Virgil wuu ku ciyaaraa xanuunka laakiin ma ciyaari karayn (maanta), taasina ma ahayn wax wanaagsan.
“Wali waa waqti hore in laga hadlo dhaawaca Virgil van Dijk, dibna umaan eegin laakiin Pickford ayaa gebi ahaantiiba laagay.”
Thiago Alcantara ayaa uu isagana ka hadlay, waxaanu yidhi: “Thiago isaga waa jug, hadda waxa ku xidhan baraf mana garan karayno inta uu le’eg yahay, waxay se u muuqataa inaanu fiicnayn haddii aan si daacad ah u hadlo.”
Kaadhkii casaa ee la siiyey Richarlison ayaa uu isagana soo qaaday, waxaanu yidhi: “Kaliya ma ahayn casaanka Richarlison, laakiin qalad weyn ayuu ku galay Thiago.”
Ugu dambayn goolkii waqtiga dhamaadka ay dhalisay Liverpool ee laga diiday ayuu Jurgen Klopp sheegay in aanu ahayn OFFSIDE.